Hetsi-panoherana ny Kianja masoandro Tsy hijanona ny Malagasy ao La Reunion
Jerry Marcoss Harafitra ho sarimihetsika ny tantaram-piainany
20 taona teo amin’ny habaky ny zavakanto indrindra ny hira izao i Jerry Marcoss sy ny tarika izay tarihiny.
Fifaninanan’ny “Thai League 2” Namono baolina 4 i Njiva omaly
Mandravarava ry Njiva Rakotoharimalala ao anatin’ny fifaninanan’ny Thai League 2 any Thailande.
Baobab Malagasy Ampirantiana any Seoul – Korea Atsimo
Isan’ny anaovana fampirantiana ao Seoul any Korea Atsimo ny sarin'ny baobaban i Madagasikara ao Seoul- Korea.
Sarimihetsika Malagasy Mila kajiana ny kalitao, hoy I Tovomanana
Ao anatin’ny fanatontosana ny sarimihetsika hivoaka ny aprily 2021 izao ankehitriny ry zareo avy eo anivon’ny trano mpamokatra, Maki prod. A
Fitsaboana nentim-paharazana Misy misoloky ny fitomboky ny ANTM
Nanao fitoriana fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka ary fisolokiana ny avy eo anivon’ny fikambanam-pirenen’ireo mpitsabo nentim-paharazana Malagasy.
Ampanjaka sy Oloben’Ikongo « Tsy afa-misaraka amin’i Vatovavy izahay »
Nivory tao amin’ny tranobe Satrokefa ny taranak’i Ravaloarivo ny alakamisy teo. Ao ny avy ao Ikongo, Andrianony, Mananjary, Ambohisara, Nosy Varika, Ifanadiana ary nanao fanambarana fa Vatovavy dia tokana iray tsy mivaky.
National Geographic Society Awards Mpikaroka Malagasy no nahazo ny loka
Jeannie Raharimampionona, teratany Malagasy, no nisalotra ny loka “National Geographic Society – Buffet Awards for Conservation in Africa and Latin America 2020”.
« Colisée de la Honte », izany hoe Kianja masoandron’ny fahamenarana na koa hoe mahamenatra, no hiantsoan’ireo malagasy manohitra ny fananganana ny Kianja masoandro ao anatin’ny rovan’Antananarivo monina atsy La Reunion. Mitohy araka izany ny fitakian’izy ireo hanesorana ity fotodrafitrasa ity ao an-dRova.
Hisy indray ny sabotsy 11 jolay izao ny hetsika hatao ao St Pierre ary saloran’izy ireo ny anarana hoe Hetsika fotsy mena maitso hatrany. Tongava maro hiara-hankalaza ny fandresena tamin’ny tolona Ambohitrimanjaka, hanohy ny tolona amin’ny fandravana ny Colisée de la Honte, hoy ny teny fanentanan’izy ireo.